काभ्रेमा बो’क्सी भ’गा’उने भन्दै एक महिलाको गाला तातो पन्यूले डा’मे – Dainik Sangalo
काभ्रेमा बो’क्सी भ’गा’उने भन्दै एक महिलाको गाला तातो पन्यूले डा’मे
November 2, 2020 198
काठमाण्डौं । समाजमा अझै बोक्सी जस्ता अन्धविश्वास कायमै रहनाले महिलाहरुले अनाहकमा दुख पाइरहेका छन् । यस्तै घटना काभ्रेमा भएको छ । एक महिलाले यस्तै अन्ध विश्वासका कारण दुख पाउनु परेको छ ।
त्यहाँ बो क्सी भ गा उ न भन्दै ३७ वर्षीया महिलालाई माता बताउने एक बालिकाले गाला तथा शरीरका अन्य भागमा तातो पन्युँले डा मे की छिन् । महिलाका पतिले मातालाई घरमै बोलाएर झा र फु क गरिदिन भनेपछि बो क्सी भ गा उ न पन्युँ त ता ए र महिलाको गाला, हातको औंला र शरीरका विभिन्न भागमा डा मि ए को थियो ।
पाँचखाल नगरपालिका–१० की शर्मिला विकलाई सोही नगरपालिका–१२ की आफूलाई माता बताउने १६ वर्षीया बालिकाले बो क्सी भ गा उ न भन्दै तातो पन्यूँले डा मे की हुन् । लामो समयदेखि मानसिक रोगबाट पी डि त महिलालाई बो क्सी भ गा उँ दा निको हुन्छ भन्ने अन्ध विश्वासका कारण पन्युँ डा मि ए को हो ।
श्रीमान् सानुबाबु विकले मातालाई घरमै बोलाएर श्रीमतीलाई झा र फु क गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
ती बालिकाले भने डेड वर्षअघि घरमा कुलायनको पूजा लगाउँदा आफूलाई माता च ढे को बताएकी छिन् । एक वर्षदेखि माताकै रुपमा उपचार गर्दै आएकाले विश्वासका कारण महिलाको श्रीमान् सानुबाबु विकले एक महिनादेखि बोलाएको भए पनि आफू नगएको उनले दावी गरिन् ।
बालिकाले थप दावी गरिन्– ‘भर्खर एसईई दिएर बसेकी मैले यस्ता धेरै महिलाहरुलाई निको पारेको छु । सामान्य परिवारको सदस्य भएकाले मैले धेरै ता न्त्रि क विद्या केही आर्जन गरेको छैन ।’
(काभ्रेबाट नेपाल समाचार पत्रका लागि मोतीराम तिमल्सिनाले लेखेको समाचार तथा तस्वीर साभार गरिएको हो ।)
Prevसुनसरीका ट्याक्टरमा मोटरसाइकल ठोकिँदा २ को मृत्यु
Nextकाभ्रे बनेपामा बेवारिसे शवको पहिचान नखुलेपछि प्रहरीले गर्‍यो फोटो सार्वजनिक
को संग विवाह गर्दै छन मनोज गजुरेल… हेर्नुहोस
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96562)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49836)